Featured Archives - अन्नपूर्ण टाइम्स
ओलीले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगे सभामुख
विश्व रोइरहेको बेला, म कसरी मनाउँ नयाँ बर्ष २०७७ ?
काेराेना कहर : सहर भन्दा गाउँ जोखिममा
राष्ट्रसेवकदेखि मनोरञ्जनमा रमाउदै दर्शक हसाउँदै रमेश खत्री
रामेछापको माकादुम हाल खाँडादेवी गाउपालीका ६ खत्रीगाऊमा सामन्य परिवारमा हुर्केर सानैदेखि रमाउने, हसिलो मुहारका रमेश खत्री पौडेललाई रामाइलो गर्न सानै देखिन रुचि रहेको बताउछन । लोकगीत खुब मन पर्ने रेडियो टिभिमा बोलेको सुन्दा हेर्दा म पनि कहिले यस्तो बोल्न सक्छु होला मनमा कुरा खेल्थियो भन्छन, नाचन जान्नमन लागेर लालिगुराँस...
के हो ड्राई नीडलिंग पद्धतीको उपचार ? कस्ता-कस्ता रोगको उपचार गरिन्छ ?
- डा. सम्बन्ध तण्डुकार, ड्राई नीडलिंग बिशेषज्ञ ड्राई नीडलिंग के हो ? ड्राई नीडलिंग भन्नाले अती बिशेष प्रकृतिको शुक्ष्म सियोको (कपालको केश जस्तो) माध्यमबाट गरिने उपचार पद्दती हो । यस बिधि बाट उपचार गर्दा कुनै पनि औषधीको प्रयोग गरिदैन। असाध्ये पिडा भएको शरीरको अंगलाई शान्ती मिल्दछ । ड्राई नीडीलिङ् बिधिबाट उपचार गर्दा...
कसरी जन्मियो ढाका टोपी ? छोरीले टोपी लगाउनुको अर्थ के ?
स्वागत नेपाल ढाका टोपी छोरीहरुले लगाएर फेसबुकमा फोटो राखेकोमा केही इतिहासलाई सम्मान गर्न नसक्ने मूर्ख, अध्ययनहीनहरुले हेलाँ गरेर लेखे, उडाउन खोजे । लगाउनेहरुलाई पनि थाहा थिएन कतिलाई । तर, मैले २०५८ मै एउटा अनुसन्धानात्मक शोध गरेर प्रकाशित पनि गरेको थिएँ । शोधको मुख्य स्रोत इतिहासकार द्वय ज्ञानमणि नेपाल ज्यू र...
के हो बाथ रोग ? यसको उत्कृष्ट उपचार ब्लु लोटस हस्पिटल
डा. सुरज कर्माचार्य, बाथ रोग भनेको के हो ? हामीले सामान्य बुझाईमा शरीरका कुनै पनि जोर्नी सुन्निने, दुख्ने वा जोर्नी सम्बन्धी हुने समस्यालाई बाथ रोग भनेर भन्दछौं । हाम्रो शरीरका जोर्नीलाई असर गरेर खराबी उत्पन्न गराउने रोगलाई बाथ रोग भनिन्छ । बाथ रोग शरीरका जोर्नीसँग सम्बन्धी रोग हो । उदाहरणको लागि हड्डी खिइएको,...
8 Notable Energy Centres Of Our Body
Most of us are familiar with the seven Chakras or energy centers of the body. Although these Chakras are the main energy centers of the body, we actually have over 70,000 other smaller energy centers or scattered throughout the body like stars. While the root, sacral, solar plexus, heart,...
उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिंदै छठ पर्व सम्पन्न (फोटो फिचर)
काठमाडौं - उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिंदै छठ पर्व सम्पन्न भएको छ। यसवर्ष छठको चौथो तथा अन्तिम दिन आज व्रतालुहरु बिहान जलाशयमा स्नान गरी उदाएका सूर्यदेवतालाई अर्घ्य दिएपछि छठ विधिवत रूपमा सम्पन्न भएको हो। ३६ घण्टासम्म पानीसमेत नखाई व्रत बसिने यो पर्वमा अस्ताउँदो र उदाँउदो सूर्य देवतालाई अर्घ दिँदै छठीमाताको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। अघ्र्य सामग्रीमा ठकुवा, कसार, केरा, उखु,...
एक अध्ययन अनुसार; आधाभन्दा धेरै महिलाहरुको ‘ब्याकअप पार्टनर’
घरमा श्रीमती छाडेर श्रीमानले अरुलाई मन पराएको र घरबार नै बसाएको घटना त धेरै आउने गर्छ । तर, कुनैपनि सम्बन्धमा रहेका महिलाहरु पनि आफ्नो भावना साझेदार गर्न र यदि श्रीमान्ले धोका दिएको अवस्थाका लागि भनेर ‘ब्याकअप पार्टनर’ राख्छन् भन्ने कुरा सुन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । जमाना बदलिएको छ...
रामेछाप विमानस्थलमा उडान चापसँगै सुरक्षामा यति धेरै लापरबाही किन ?
रामेछाप - रामेछाप विमानस्थलमा अहिले हवाई उडान र अवतरणको चाप छ । जति चाप छ, त्यति नै लापरवाहि पनि छ । विमानस्थलमा सर्वसाधारणले देखेका र लुकाउनै नसक्ने केहि लापरवाहि निम्न छन । लापरवाहि नम्बर १ . विमानस्थलका एटिसी उड्नका लागि र वस्नका लागि मात्र अनुमति दिने काममा तल्लिन छन् । विमानस्थलबाट...
तस्बिरमा हेर्नुहोस् गोदावरी फूलको प्रदर्शनी मेला
फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले आयोजना गरेको ‘१३ औं गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी-२०७६’ शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । । ललितपुरको जावलाखेल खेल मैदानमा भएको प्रदर्शनी सोमबारसम्म चल्ने छ। ‘रोपेर फूल गोदावरी, सजाऔं घर आँगन वरिपरी’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको हो। तिहार नजिकिँदै गर्दा भएको यस मेलाले नेपाली फूल प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्ने एसोसिएसनले जनाएको छ। २०५३...
देश विकासको बाघडोर सरकार र जनतालाई बराबर
श्रीना नेपाल हुँदैन विहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए बन्दैन देश दुई चार सपूत मरेर नगए ! अझै कति सपुतको बलि चाहिएको हो? मलाई त लाग्छ अब त असल सपुतले पनि यश देशमा पाइला टेक्न जर्मराउँछन् होला१ ती वीर गोर्खालीका पद्चापहरु पनि काप्दै होलान् नामको मत्रै सर्वभैमित्ता देखेर ! दोष...